Wargeysyada Wargeysyada Wadda: 5 Talooyin
Tilmaamaha lagu qoro Wargeysyada Cad ee iibiya
Sabti, Agoosto 23, 2014 Jimcaha, Agoosto 22, 2014 Douglas Karr
Toddobaad kasta, waxaan soo dejiyaa waraaqo cadcad oo aan akhriyaa. Ugu dambeyntiina, awoodda warqad cad waxaa lagu cabiraa, maahan tirada soo degsashada, laakiin dakhliga soo socda ee aad ka heshay daabacaaddiisa. Wargeysyada qaarkood way ka fiican yihiin kuwa kale waxaanan doonayay inaan la wadaago ra'yigayga ku saabsan waxa aan aaminsanahay inay samayso warqad weyn.
Warqada cad waxay ka jawaabaysaa arin adag oo leh faahfaahin iyo macluumaad taageeraya. Waxaan arkaa qaar ka mid ah waraaqo cadcad oo si fudud u noqon lahaa qoraal blog ah. Warqad caddeyn ah maahan wax aad dooneysid rajo inaad si fudud uga heshid khadka tooska ah, waa wax intaas ka badan - in ka badan boostada blogka, ka yar eBook.
Warqada cad wuxuu wadaagaa tusaalooyin macaamiisha dhabta ah, rajooyin, ama qoraallo kale. Kuma filna in la qoro dukumiinti sheegaya qoraalka, waxaad u baahan tahay inaad keento caddeyn sax ah oo ku saabsan.
Warqada cad ayaa ah bilicsan. Aragtida ugu horreysa ayaa la tiriyaa. Markii aan furo warqad cad oo aan arko Microsoft Clip Art, caadi ahaan ma sii akhriyo. Waxay ka dhigan tahay in qoraagu uusan waqti qaadan… taas oo macnaheedu yahay inay u badan tahay inaysan ku qaadanin waqtiga qorista nuxurka, sidoo kale.
Warqada cad ayaa ah si xor ah looma qaybiyo. Waa inaan isdiiwaangaliyo. Waxaad ku iibinaysaa macluumaadkaaga macluumaadkeyga - waana inaad igu sifeysaa sidii hoggaamiye ahaan foomka diiwaangelinta ee loo baahan yahay. Foomamka Soo Degitaanka waxaa si fudud loo dhammaystirayaa iyadoo la adeegsanayo aalad sida dhismaha foomka internetka. Haddii aanan dhab ka ahayn mowduuca, ma soo degsanayo warqadda cad. Bixi bogga soo degida weyn ee iibiya warqadda cad oo aruuriya macluumaadka.
5 ilaa 25 bogga cad waa in lagu qasbo igu filan inaan kugu tixgeliyo inaad tahay awood iyo ilo shaqo kasta. Ku dar liisaska hubinta iyo meelaha loogu talagalay qoraalada si aan si fudud loogu akhrin loona tuurin. Ha iloobin inaad ku daabacdo macluumaadkaaga xiriirka, bogga, baloogga iyo xiriirada bulshada dhexdeeda ee shaqada.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo sameeyo samaynta wargeysyada ku kalifaya inay ku kalifaan iibka.
Transparency - Midka koowaad waa in si daahfuran loogu sheego akhristaha sida saxda ah ee aad u xalliso dhibaatadooda si faahfaahsan oo kooban. Faahfaahinta waa mid aad u kooban, dhab ahaantii, in ay aad u doorbidi lahaayeen inay kuugu yeeraan si aad u daryeesho dhibaatada intaad dhab ahaan samayn lahayd naftooda. Dad is-wax-u-qabta ayaa u isticmaali doona macluumaadkaaga inay ku sameeyaan iskooda…. ha walwelin… waligood marna kuma soo wacayaan. Waxaan ku qoray dhowr waraaqood oo ku saabsan hagaajinta barta WordPress - ma jiraan wax yar oo dadka ii soo wacaya si aan uga caawiyo inay sameeyaan.
Qualification - Dariiqa labaad ayaa ah inaad akhristahaaga u siiso dhammaan su'aalaha iyo jawaabaha kuu qalma inay noqdaan kheyraadkooda oo aad uga fiican tahay qof kasta oo kale. Haddii aad ku qorayso warqad cad “Sidee loo shaqaaleeyaa La-Taliyaha Warbaahinta Bulshada” oo aad u siiso macaamiishaada qandaraasyo furan oo ay ka bixi karaan wakhti kasta… ka dhig qaybtaas warqaddaada cad heshiisyada gorgortanka! Si kale haddii loo dhigo, u taageer oo u ciyaar sidaad ufiicantahay.
Wicitaanka Waxqabadka - Waxaan si dhab ah ula yaabay inta waraaqo ee aan akhristo halka aan ku soo afjaro maqaalka oo aan wax fikrad ah ka helin qoraaga, sababta ay ugu qalmaan inay wax ka qoraan mowduuca, iyo sida ay ii caawin karaan mustaqbalka. Bixinta wicitaan-ficil cad ee warqaddaada cad, oo ay ku jiraan lambarka taleefanka, cinwaanka, xirfadlahaaga iibka magaca iyo sawirka, bogagga diiwaangelinta, cinwaanada emaylka… dhammaantood waxay xoojinayaan awoodda lagu beddelayo akhristaha.
Tags: Content Suuqsida loo qoro warqad cadiibinta wargeysyadaWarqad cadtalooyinka qorista
Jul 24, 2010 markay tahay 4:16 PM
Qodobbo waaweyn, Doug. Waxaan sidoo kale ogaaday in shirkado badan oo isku dayaya inay adeegsadaan waraaqo cadcad si ay u dardargeliyaan nidaamka iibinta ay ka dhaafaan laba ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan. Marka hore, miyay sharraxayaan dhibaato gabi ahaanba taagan oo si xanuun leh ugu habboon waxa ay u siinayaan alaab ahaan ama adeeg ahaan, iyo tan labaad, maxaa iyaga ka duwan? Maaha qasab in laga fiicnaado. (Macaamilka ayaa go aansan doona taas, iyadoo aan loo eegin inta jeer ee iibiyuhu dhihi karo).
Jul 24, 2010 markay tahay 9:31 PM
@freighter, anigu ma diidani in aad qeexdo waxa farqigaagu yahay - laakiin cidina si daacad ah uma aaminayso shirkad kaliya inay dhahdo way ka duwan yihiin. Waa sababta ay muhiim u tahay in la horumariyo fariin u qalmaysa warqadda cad. Adoo qeexaya shahaadooyinka, waad kala duwanaan kartaa naftaada!